ကွင်းထဲမှာ ပြန်မြင်ရတော့မယ့် အဲရစ်ဆင် ၊ စပါးကနေ မထွက်ဘူးလို့ ပြောတဲ့ ကွန်တီ ၊ PSG ရဲ့ စာချုပ်သစ်ကို ထပ်ပြီး ပယ်ချတဲ့ ဘာပေ တို့နဲ့ . . . နံနက်ခင်း အားကစား သတင်းများ - xyznews.co
ကွင်းထဲမှာ ပြန်မြင်ရတော့မယ့် အဲရစ်ဆင် ၊ စပါးကနေ မထွက်ဘူးလို့ ပြောတဲ့ ကွန်တီ ၊ PSG ရဲ့ စာချုပ်သစ်ကို ထပ်ပြီး ပယ်ချတဲ့ ဘာပေ တို့နဲ့ . . . နံနက်ခင်း အားကစား သတင်းများ
ဘရန့်ဖိုဒ့် အသင်းကို ပြောင်းရွှေ့ လာတဲ့ ဒိန်းမတ် ကွင်းလယ်လူ ခရစ်ရှန် အဲရစ်ဆင် ဟာ ဒီတပတ်မှာ ကစားမယ့် နယူးကာဆယ် နဲ့ ပွဲမှာ ပါဝင် ကစားလိမ့်မယ်လို့ ဘရန့်ဖိုဒ့် နည်းပြက ထုတ်ဖော် ပြောဆို သွားခဲ့ ပါတယ် ။
အဲရစ်ဆင် ဟာ ၂၀၂၁ ဇွန်လ တုန်းက ယူရို ၂၀၂၀ ပြိုင်ပွဲမှာ နှလုံးဖောက် လဲကျ ခဲ့တာ ဖြစ်ပြီး နှလုံးကို စက်တပ်ထားလိုက်ရတာကြောင့် အင်တာမီလန် ကနေ ( အီတလီ မှာ ကစားခွင့် မရှိတော့တဲ့ အတွက် ) ထွက်ခွာ လာခဲ့ပြီး ဘရန့်ဖိုဒ့် ကို ဇန်နဝါရီ က ရောက်လာခဲ့သူ ဖြစ်ပါတယ် ။
နယူးကာဆယ် နောက်ခံလူ ထရစ်ပီယာ က ဂျေဒွန် ဆန်ချို ဟာ ထိပ်တန်းဆင့် ကစားသမား ဖြစ်တယ်ဆိုတာ ကို မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် မှာ ပြသ နေပြီ ဖြစ်ပြီး ယူနိုက်တက် တို့ မှန်ကန်တဲ့ ခေါ်ယူမှု ကို ပြုလုပ် ခဲ့တာလို့ ပြောဆို ထောက်ခံ သွားခဲ့ ပါတယ် ။
ယူနိုက်တက် ဟာ ဂိုးသမား ဟန်ဒါဆင် သာ နွေရာသီမှာ ထွက်ခွာ သွားခဲ့ပါက ဝက်စ်ဘရွန်း အသင်းမှာ ကစားနေတဲ့ အကယ်ဒမီ ဂိုးသမားဟောင်း ဆမ် ဂျွန်စတုန်း ကို ပြန်လည် ခေါ်ယူဖို့ စဉ်းစား နေတယ်လို့ ကြားသိရ ပါတယ် ။
လီဗာပူး နဲ့ အာဆင်နယ် တို့ဟာ ရီးရဲမက်ဒရစ် တောင်ပံ ကစားသမား မားကိုစ့် အဆန်ဆီရို ကို အပြိုင် စိတ်ဝင်စား နေကြပြီး မက်ဒရစ် မှာ ရရှိတဲ့ လုပ်ခ ထက် ၅၀% ပိုပေးကာ ကမ်းလှမ်းဖို့ ပြင်ဆင် နေတယ်လို့ သတင်း ထွက်ပေါ် လာခဲ့ ပါတယ် ။
တော့တင်ဟမ် ဟော့စပါး နည်းပြ ကွန်တီ က သူဟာ အသင်းကနေ ထွက်ခွာဖို့ အစီအစဉ် မရှိကြောင်း ပွဲကြို သတင်းစာ ရှင်းလင်းပွဲမှာ ထုတ်ဖော် ပြောဆို သွားခဲ့ ပါတယ် ။
ဒါပေမယ့် စပါး အသင်းကတော့ ကွန်တီ ထွက်သွားခဲ့ ပါက အစားထိုးဖို့ အတွက် နည်းပြဟောင်း ပိုချက်တီနို ကို စိတ်ကူးထားတယ် လို့ သိရ ပါတယ် ။
ရုရှ ရဲ့ ယူကရိန်း နိုင်ငံ အတွင်း ကျူးကျော် ဝင်ရောက်မှု ဟာ ပရီးမီးယားလိဂ် ကို ရိုက်ခတ်မှုတွေ ရှိနေခဲ့ပြီး ရုရှ သူဌေး အေဘရာမိုဗစ် ပိုင်ဆိုင်တဲ့ ချဲလ်ဆီး အသင်းက ကစားသမားတွေဟာ အဆိုပါ ကိစ္စကြောင့် တုန်လှုပ် နေကြတယ်လို့ နည်းပြ တူချယ် က ပြောဆိုခဲ့ ပါတယ် ။
ရုရှ ရဲ့ ကျူးကျော်မှု ဟာ အကြီးအကဲ ဗလာဒီမာ ပူတင် နဲ့သာ သက်ဆိုင်ပြီး ရုရှ တိုင်းက ပူတင် ကို ထောက်ခံ ကြတယ်ဆိုတာဟာ အကြီးမားဆုံးနဲ့ အအောင်မြင်ဆုံးသော ဝါဒဖြန့်မှု ဖြစ်တယ်လို့ ချဲလ်ဆီး ပိုင်ရှင် အေဘရာမိုဗစ် ရဲ့ သမီး ဖြစ်သူက ဆိုရှယ် မီဒီယာမှာ ရေးသားခဲ့ပြီး ယူကရိန်း ကို ကျူးကျော်တာဟာ ရုရှ မဟုတ်ဘဲ ပူတင်သာ ဖြစ်တယ်လို့ ဖော်ဆို သွားခဲ့ ပါတယ် ။
အဲဗာတန် အသင်းဟာ သူတို့ရဲ့ ယူကရိန်း ကစားသမား အပေါ် လေးစားမှု ပြသတဲ့ အနေနဲ့ အိမ်ကွင်း ပွဲတိုင်းမှာ ပွဲမစခင် ဖွင့်လေ့ ရှိတဲ့ လေကြောင်းသတိပေး ဟွန်းသံရှည် ကို ဒီတပတ် ကစားမယ့် ပွဲမှာ မဖွင့်လှစ်ဖို့ ဆုံးဖြတ် လိုက်တယ်လို့ သိရ ပါတယ် ။
မန်စီးတီး နည်းပြ ဂွာဒီယိုလာ ကတော့ ယူကရိန်း လက်ရွေးစင် ဇင်ချန်ကို ဟာ ရုရှ ရဲ့ ကျူးကျော်မှုကြောင့် အကြီးအကျယ် ခံစားနေရပေမယ့် ဒီတပတ် ကစားမယ့် ပရီးမီးယားလိဂ် ပွဲစဉ်မှာ ပါဝင် ကစားသွားမယ်လို့ ထုတ်ဖော် ပြောဆို သွားခဲ့ ပါတယ် ။
မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် ကလည်း တနှစ်ကို ပေါင် သန်း ၄၀ ရရှိ နေတဲ့ ရုရှ လေကြောင်းလိုင်း Aeroflot နဲ့ စပွန်ဆာ စာချုပ်ကို ဖျက်သိမ်းသွားခဲ့ ပါတယ် ။
ဥရောပ ဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ် UEFA ဟာ ဒီနှစ်ရဲ့ ချန်ပီယံလိဂ် ဗိုလ်လုပွဲ ကို ရုရှ နိုင်ငံ စိန့်ပီတာစဘတ်မြို့ အစား ပြင်သစ် နိုင်ငံ ပါရီမြို့ ကို ရွှေ့ပြောင်း လိုက်ပြီ ဖြစ်ပါတယ် ။
ဒါပေမယ့် ရုရှ အသင်း ကိုတော့ ဥရောပ နဲ့ ကမ္ဘာ့ဖလား ဆိုင်ရာ ပြိုင်ပွဲတွေ ကနေ ထုတ်ပယ်ဖို့ အစီအစဉ် မရှိသေးဘူးလို့ သိရ ပါတယ် ။
မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် အသင်းရဲ့ ဂန္ထဝင် နည်းပြဟောင်း ဆာအဲလက်စ် ဖာဂူဆန် ကို သူ့ရဲ့ အသင်းဟောင်း အဘာဒင်း ကလပ်က ရုပ်တု ထုလုပ်ကာ ကွင်းရှေ့မှာ ထားရှိ ဂုဏ်ပြု ပေးခဲ့ပါတယ် ။
ဖာဂူဆန် ဟာ မန်ယူနိုက်တက် ကို မရောက်လာခင်က အဘာဒင်း ကို ကိုင်တွယ် ခဲ့ပြီး သာမာန် ကလပ် အသင်း အဖြစ်ကနေ စကော့တလန် ရဲ့ အင်အားကြီး အသင်းဖြစ်အောင် လုပ်ဆောင်ပေးခဲ့သလို ပထမဆုံး ဥရောပ အောင်မြင်မှု ကိုပါ ရယူပေးခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ် ။
ယူဗင်တပ် အသင်းနည်းပြ အယ်လီဂရီ က တိုက်စစ်မှူး ဗလာဟိုဗစ် ကို ဒီတပတ် စီးရီးအေ ပွဲစဉ်မှာ အနား ပေးသွားပြီး ချန်ပီယံလိဂ် အတွက် အားမွေးစေမယ်လို့ ထုတ်ဖော် ပြောဆို သွားခဲ့ ပါတယ် ။
PSG ဟာ တိုက်စစ်မှူးလေး အမ်ဘာပေ ကို ၂ နှစ်စာချုပ်သစ် ၊ ဘာပေ အလိုရှိသလောက် လုပ်ခ လစာ နဲ ၂၀၂၃ မှာ ( ဘာပေ ဆန္ဒ ရှိပါက ) စာချုပ် ဖျက်သိမ်းခွင့် တွေပါရှိတဲ့ စာချုပ်သစ် ကို ကမ်းလှမ်းခဲ့ပေမယ့် နွေရာသီမှာ စာချုပ်ပြည့်ပြီး လမ်းခွဲဖို့ ဆုံးဖြတ် ထားတဲ့ ဘာပေ က ငြင်းပယ် သွားခဲ့တယ်လို့ သိရှိရ ပါတယ် ။
မန်ယူနိုက်တက် တိုက်စစ်မှူးကြီး ခရစ္စတီယာနို ရိုနယ်ဒို ကတော့ သူ ဟာ နောက်ထပ် ၃-၄ နှစ်လောက် ဘောလုံး ဆက်ကစားဖို့ ရှိနေသေးတယ်လို့ အင်တာဗျူးမှာ ထုတ်ဖော်ပြောဆို သွားခဲ့ ပါတယ် ။
Previous Article ဖလားတွေ တောက်လျောက်ယူနေတဲ့ ချဲလ်ဆီး ကို လီဗာပူး တားဆီးနိုင်မလားဆိုတာ ခန့်မှန်းသုံးသပ်လိုက်တဲ့ ပေါလ် မာဆွန်
Next Article ပုံစံကောင်းကို ဆက်ထိန်းပြီး ဝက်ဖိုဒ့် ကို အနိုင်ကစားဖို့ တိုက်တွန်းလိုက်တဲ့ မန်ယူနိုက်တက် နည်းပြ ရန်းနစ်